musha / zvakavanzika urongwa
3. KUTANGA KWEMUNHU MUNHU
4. SHANDISA KUITA ZVAKO MUNHU WAKO
1. Kuita kwebvumirano
2. Kuteerera nemhosva yepamutemo
3. Nokuda kwekuchengetedza zvido zvepamutemo
4. Kwezvinangwa zvebhizimisi mukati uye kuchengetedza zvinyorwa
5. Nokuda kwezaziso zvemutemo
6. Nokuda kweMitambo
7. Kutibatsira mukuvandudza mishonga yedu nemashandiro
5. CHIKAMU CHENYAYA YAKO
6. FUNGA KUTI UYE ZVINOTAURWA NEZVATATIDZO
7. NGUVA YEDU TINOGONA KUITA MAZVINHU ANO
8. MATENDO AKO OKUITA ZVAKUNHU
9. HAPANA KUSHANDISWA KUNOFANIRA
10. TIME LIMIT YOKUZIVA
11. MAZANO ANOKUTEVERA MAZVO ANO
12. SHURI YEDU RECHOKWADI
Central Clearing Ltd (pano ichinzi "Company" kana kuti "isu" kana "FXCC" kana kuti "isu"). Iyi Inonyorwa Inotsanangurwa nzira iyo FXCC inounganidza nayo inoshandisa uye inochengetedza ruzivo rwemunhu kubva kune vashandi vayo vanogona uye nevatengi vatengi. FXCC yakatsunga kuchengetedza unhu hwako. Nokuvhura nhamba yebhizimisi neFXCC mutengi anopa mvumo kune yakadai yekuunganidza, kushandiswa, kuchengetedza nekushandiswa kwemashoko ega ega neFXCC sezvinotsanangurwa pasi apa.
Icho chinangwa cheKambani yekuremekedza kuchengetedza kwemashoko uye huri hwega hwevanhu.
Iyi Inangwa yePamusoro inotarisira kupa iwe ruzivo pamusoro pekuti tinounganidza sei uye tinoshandisa data yako pachako, kusanganisira chero dhenda raunogona kupa kuburikidza newebsite yedu apo iwe unyoresa kune webhusaiti yedu.
Zvakakosha kuti iwe uverenge iyo Mvumo yeChinyorwa Chekuita pamwe chete nedzimwe zveruzivo rwepachivande kana chiziviso chekushandura zvakanaka chatinogona kupa pane dzimwe nguva apo tiri kuunganidza kana kugadzirisa dunhu rega rega pamusoro pako kuitira kuti uve kunyatsoziva kuti sei uye nei tichishandisa deta yako . Iyi Nheyo inowedzera mamwe mazano uye haina kurongwa kuti iwedzere.
Kune FXCC tinonzwisisa kukosha kwekuchengetedza zvakavanzika zvehutano hweMuenzi wedu uye tinozvipira kuratidza kuchengeteka kwehupi hupi hupi hupi hunopiwa nevatengi vedu kuburikidza newebsite ino.
Kuti tipe zvikwereti nemari kumaklayiti edu zvakanaka uye zvakarurama, kana iwe ukashandisa kubhadhara kushandisa imwechete kana yakawanda yemashandi edu tichakukumbira kuti uwane ruzivo rwemunhu. FXCC inobata kodzero uye basa maererano nebasa rebhizimisi rakaitwa, kutarisa kunyatsoratidzwa kwedhesi rakachengetwa mumashoko edzimwe nguva nekukumbira kuti uwane zvinyorwa zvitsva zvakapiwa kana kuti kusimbiswa kwehutano hwezvambotaurwa.
Rudzi rwemunhu wega wega ratinogona kuunganidza rinogona kusanganisira (asi harisi kurega):
Mutengi wezita reMutengi.
Kumba uye kero dzebasa.
Musha uye basa nhare nhare.
Mobile / Nhamba Yenhare.
Chikero chetsamba yemumhepo.
Pasipoti nhamba / kana nhamba yeAzisi.
Hurumende yakabudisa photo ID nechisayina.
Mashoko pamusoro pehutano hwemabasa uye mari
Mashoko pamusoro pezvakaitika kare zvekutengeserana uye kushivirira kweruzhinji.
Mashoko pamusoro pezvidzidzo uye basa
Nzvimbo Yemutero uye Nhamba Yechipimo.
Nhepfenyuro Dhepfenyuro inosanganisira [nhamba yebhangi nemashoko ekubhadhara kadi
Transaction Data inosanganisira [tsanangudzo pamusoro pekubhadhara kune uye kubva kwauri].
Technical Data inosanganisira [internet protocol (IP) kero, dhiyabhorosi yako, shanduro yemhando uye shanduro, nguva yekugadzirisa nzvimbo uye nzvimbo, shanduro yemapurani inowanzo uye shanduro, shanduro yekombiyuta uye shanduro nemamwe teknolojia pane zvishandiso zvaunoshandisa kuwana iyi web site ].
Dhipatimendi Data inosanganisira [zita rako rekushandisa nephasiwedi, kutenga kana mirairo yakaitwa newe, zvaunofarira, zvido zvako, mhinduro uye mhinduro dzekuongorora].
Dhiyabhorosi Dhidhiyo inosanganisira [ruzivo pamusoro pekushandisa kwaunoita webhusaiti yedu, zvigadzirwa nemabasa].
Kutengesa neNyanzvi Dhepfenyuro inosanganisira [zvaunofarira pakugamuchira kushambadzira kubva kwatiri uye isu vatatu pamwe chete uye zvaunofarira kutaurirana].
Isu tinounganidza, kushandisa uye kugovera Dhigirii Dharedhi dzakadai sedhipatimendi yekuverenga kana kuverenga kwechinangwa chipi zvacho. Zvakawandisa Dhiyabhorosi zvingawanikwa kubva pane zvaunoita asi hazvibvunzwi semunhu oga mumutemo sezvo iyi deta isingatauri pachena kana kuti zvisina kuratidza unhu hwako. Somuenzaniso, tinogona kuunganidza Dhiyabhorosi yako yekushandisa kuti uverenge chiyero chevashandi vanogona kuwana imwe nzvimbo yepawebsite. Zvisinei, kana tikabatanidza kana kubatanidza zvikamu zveAggregated Data nemashoko ako ega kuitira kuti zvigone kukuratidza zvakananga kana kuti zvisina kunaka, tinoshandisa data yakabatana se data chaiyo iyo inoshandiswa maererano neshoko rino rega rega.
Hatina kuunganidza chero mapoka eZvibhuku zveBhuku Dheyo pamusoro pako (izvi zvinosanganisira tsanangudzo pamusoro pezera rako kana rudzi, zvechitendero kana mafilosofi, hupenyu hwepabonde, zvepabonde, maonero ezvematongerwe enyika, nhengo dzehurumende, ruzivo pamusoro pehutano hwako uye mazita ezvibonde uye biometric data) .
Isu tinogonawo kuunganidza mamwe mashoko pamusoro pekushandisa kwemashumiro edu. Izvi zvinogona kusanganisira mashoko kubva iwe uye / kana kambani yako inogona kuzivikanwa sezviitiko zvaunoshandisa pairi, kushandisa kwako kwehutano, marudzi ezvinyorwa, maitiro uye nheyo dzaunoshandisa, nzvimbo dzaunotumira nayo, nguva yezvikamu uye nedzimwe nheyo dzakafanana. Mashoko aya akaunganidzwa anogonawo kutorwa nemutemo kubva kune vamwe vatatu, sevane masimba ehurumende, makambani akakuzivisai kuFXCC, makambani ekugadzira makadhi, pamwe chete nemasimba aripo anowanzotenderwa kutenderwa kuita.
Kutaura kwako kwemagetsi uye / kana yefoni kunyoreswa uye ndiyo chete inzvimbo yeFXCC uye inoratidza uchapupu hwekutaurirana pakati pedu.
Iwe une sarudzo yekupa chero ipi zvayo kana yose yehupenyu hwemunhu hunodikanwa. Zvisinei, ruzivo rwakashaya runogona kukonzera kuti isu tisingakwanisi kuzarura kana kuchengeta kambani yako uye / kana kukupa nemashandiro edu
Isu tinounganidza nzira nekugadzirisa ruzivo runotibvumidza kuita zvatinosungirwa nemvumo newe uye kuti titevedze nemitemo yedu yepamutemo.
Pasi pane zvinangwa izvo ruzivo rwako pachako ruchiitwa:
Tinoshandisa deta yako kuitira kuti tikupe nemabasa edu uye zvigadzirwa, uye kuti tikwanise kupedzisa mararamiro edu ekugamuchirwa kuitira kuti tive neukama hwesungano nevatengi vedu. Kuti tikwanise kupedza vatengi vedu pa-boarding tinoda kuongorora huzivikanwe hwako, ita kuti mutengi ave nekushingaira maererano nemitemo yekutonga, uye tinofanira kushandisa zvinyorwa zvatinowana kuti tishandise zvakajeka account yako yebhizimisi neFXCC.
Zvimwe mitemo yemitemo inogadzwa nemitemo inobvumirana yatinenge tatarisana nayo, pamwe nemitemo yepamutemo, semu mitemo yekushora mari, mitemo yebasa rezvemari, mitemo yehurumende, mitemo yega yega uye mitero yemitero. Mukuwedzera, kune vatongi vezvikwata zvakasiyana-siyana vane mitemo nemitemo inoshanda kwatiri, iyo inogadzirisa zvakakodzera basa rekugadzirisa dhidhiro chekadhi rechikwereti, kubhadhara kubhadhara, kugadziriswa kwehuzivi uye kutevedzwa kwematare edzimhosva.
FXCC inotarisa dunhu rega rako kuitira kuchengetedza zvido zvepamutemo zvinotungamirirwa nesu kana nevechitatu, apo chikamu chakanaka ndechekuti tine bhizinesi kana rekutengeserana kushandisa kushandisa ruzivo rwako. Kunyange zvakadaro, haufaniri kuenda zvisina kururama pamusoro pako uye zvakakunakira iwe. Mienzaniso yezvinhu zvakadai zvekushanda zvinosanganisira:
Kutanga dare remhosva uye kugadzirira kudzivirirwa kwedu mumitemo yekutonga;
zvinoreva uye nzira yatinoita kuti tive nehutano hwekambani yeTI uye yehutano hwekuchengetedza, kudzivirira kukanganisa kwemhosva, nheyo yekuchengetedza, kuregererwa kwekuregererwa kwekutonga uye kurwisa kudarika;
zviyero zvekutarisira bhizinesi uye nekuwedzerwa kusimbisa mishonga nemashandi;
Zvinogona kudiwa kuti uratidze dheinhau yako pachako yebhizimisi dzomukati uye rekuchengetedza rekodhi, izvo zviri mudura hwedu chaiyo uye zvinotarisirwa kuti titevedze mitemo yedu yemutemo. Ticharamba tichengeta zvinyorwa kuitira kuti tive nechokwadi chekuti iwe unoteerera zvibvumirano zvako zvesungano maererano nesungano inodzora ukama hwedu newe.
Dzimwe nguva, mutemo unoda kuti tikukurudzire zvimwe zvekuchinja kune zvigadzirwa uye / kana mabasa kana mitemo. Tingafanira kukuzivisai nezvekushandura kwakabatana nemishonga yedu uye maitirwo, naizvozvo tichasungirwa kugadzirisa ruzivo rwako pachako kuti tikutumire zviziviso zvepamutemo. Iwe ucharamba uchingowana ruzivo urwu kunyange kana iwe usarudza kusagamuchira ruzivo rwekutengesa zvakananga kubva kwatiri.
Isu tinogona kushandisa deta yako yekutsvakurudza nekutsvakurudza zvinangwa, uye nhoroondo yako yekutengeserana kuitira kuti iwe ubudise chero kuongorora, nhoroondo, mitsva inogona kukufadza iwe tsamba yako yakanyoreswa email. Ndapota cherechedza kuti iwe unogara uine kodzero yekuchinja sarudzo yako kana iwe usingadi kugamuchira zvinyorwa zvakadaro zvakare.
Kana iwe usingadi kuti tishandise ruzivo rwako pachako nenzira iyi, tapota tumira email kune support@fxcc.com uchikumbira kuti urege kutaurirwa chero zvinangwa zvekutengesa. Kana iwe uri we-on-line kubhadharira, unogona kupinda iwe Trader Hub user profile uye kugadzirisa zvaunofarira zvese panguva ipi zvayo.
Isu tinogona kushandisa ruzivo rwomunhu oga rwakapiwa newe kuti uve nechokwadi chepamusoro-soro paunopa zvigadzirwa nemishandiro edu.
Chinangwa chikuru chatinoshandisa ruzivo rwako pachako ndechekutibatsira kuti tinzwisise zvinangwa zvepfuma uye tive nechokwadi chokuti mazano anobatsira akakodzera purogiramu yako. Uyezve, ruzivo urwu runobatsira FXCC kupa hutano hwehutano. Apo patinogona kukutumira iwe kudengesa zvinhu (kusanganisira asi kwete kumumiririri weSMS kana e-mail kuti iwe uone, maitiro ekudzivirira, kana mamwe mashoko) nenguva nenguva yatinofunga kuti ichakubatsira kwauri, tinoziva kukosha kwekuremekedza your privacy. Kunze kwekuti iwe wakaziviswa zvimwe, ruzivo rwemunhu hwatinoshandisa runoshandiswa pakugadzirisa nekugadzirisa kero yako, kuongorora zvinodiwa zvako zvinoenderera mberi, kukurudzira kushandiswa kwevatengi uye zvigadzirwa uye kukupa ruzivo rwakapfurikidza kana mikana yatinotenda ingave yakakosha kwauri.
FXCC haingaratidzi ruzivo rwako pachako kunze kwemvumo yako yekare, zvisinei, zvichienderana nechigadzirwa kana basa rakabatanidzwa uye zvimwe zvipingamupinyi pamashoko asingazivikanwi, izvi zvinoreva kuti ruzivo rwemunhu humwe runogona kuzarurirwa kune:
Vashandi vezvevashandi uye vadzidzisi vezvenyanzvi kune FXCC avo vakagadziriswa kuti vatipe kutarisira, mari, inshuwarheni, tsvakurudzo kana mamwe mabasa.
Kuzivisa vatengesi kana vashandi pamwe navo vatinoshamwaridzana navo (chero ipi zvayo inogona kunge iri mukati kana kunze kweEuropean Economic Area)
Vatengesi vechikwereti, matare, matare uye masimba ekutonga sezvakabvumirana kana kugamuchirwa nemutemo
Kubhadhara zvikwereti kana mahofisi ereferensi, vatatu vevashandi vanoita basa rekuvimbika, kudzivirira kunyengeri, zvinopesana nemari yekutsvaga mari, chiziviso kana kushingaira kwekuongorora chekwereti
Ani naani anogamuchirwa nomunhu, sezvinotsanangurwa nomunhu iyeye kana kuti kontrakiti
Kushamwaridzana kweKambani kana chero imwe kambani muboka rimwechete reKambani.
Kana izvi zvichitsvaga kuti zviitwe nemutemo kana chero humwe hurumende, huchaitwa kuitira kuti FXCC iite maererano nemitemo ipi zvayo yemitemo, inodziviririra kubva kune inogona kubiridzira, uye kuchengetedza zvibvumirano zvevashandi vebasa. Kana izvi zvichitsvaga zvinenge zvichange zvichishandiswa pane zvido zve "kuda-kuziva-," kunze kwekunge zvakarayirwa nehurumende yekutonga. Kazhinji, tinoda kuti masangano kwete pasi peFXCC anobata kana kuwana ruzivo rwemunhu wese sevashandi vebasa kuFXCC vanobvuma kuvanzika kwemashoko aya, vanoita kuremekedza kodzero yega yega yega yega uye kutevedzera Maitiro ekudzivirira Data nekusarudza iyi.
Mune mimwe mamiriro ezvinhu, tinogona kupfuurira kune ruzivo kuvanhu vatatu kana isu tichibvumirwa nemutemo kuti tiite saizvozvo kana isu takabvumirwa pasi pemitemo yedu yepamutemo uye yepamutemo kana kana takapiwa mvumo yako.
Tinogonawo kuzivisa ruzivo rwako rwevanhu kune vamwe vatatu kana isu tiri pasi pebasa rekuzivisa kana kugovera dheinhau rako pachako kuitira kuti titevedze chero mutoro wepamutemo, kana kuti titsigire kana kushandisa zvido zveSite uye Zvitemo.
Nokukuisa ruzivo rwako, unobvumirana nekushandiswa kwaFXCC kwemashoko aya, sezvakataurwa mumutemo uyu. Nokusvika nekushandisa izvi iwe uri kubvuma kuti iwe waverenga, wakanzwisisa uye unobvumirana nemutemo wepabonde. Tinochengetedza kodzero yekushandura mitemo yedu yega yega yega uye ichavandudza peji ino maererano. Ndapota rongororai hurongwa hwedu kakawanda sezvinobvira - kushandiswa kwako kushandiswa kweSiti kucharatidza kuti unobvumirana nekushanduka kwakadaro.
Iyo Site inogona, nguva nenguva, inosangana nehutano uye kubva kune mawebsite ehama dzedu dzekambani nevatengi. Kana iwe ukatevera hukama kune imwe yewebsite idzi, tapota ona kuti mawebsite awa anogona kuva nemitemo yavo yega yega uye kuti hatigamuchiri mutoro chero upi zvake kana mutoro wemitemo iyi. Ndapota chengetedza mazano aya usati watumira chero dhepe yako kune mawebsite.
Iwe unogona kubvisa kubvumirwa kwako chero nguva, zvisinei kana kushandiswa kwemashoko ako pachako usati wagamuchira kubviswa kwako hakuzogadziriswi.
FXCC ichachengetedza ruzivo rwako pachako kwenguva yakareba tine ukama hwebhizimisi newe.
Nechemitemo tinotarisirwa kupindura kune chero zvikumbiro zvemunhu oga mukati mezuva re30, kunze kwekuti rudzi rwekukumbira runoda nguva yakawanda yekuongorora nokuongorora. Kodzero dzinogona kuwanikwa kwauri maererano nehutano hwemunhu hwatinahwo pamusoro pako hwakanyorwa pasi apa:
Gamuchira kuwanikwa kwedunhu rako rega. Izvi zvinoita kuti iwe ugamuchire kopi yemunhu wega data yatinobata pamusoro pako.
Kumbira kugadziriswa / kururamiswa kwemashoko ega atinobata pamusoro pako. Izvi zvinokugonesa kugadzirisa chero zvese zvisingakwanisi kana zvisiri izvo zvatinezvo pamusoro pako. Tinogona kukumbira ruzivo rwakawedzerwa uye zvinyorwa zvinotarisirwa kuti zvive nechokwadi chekuda kwekushandurwa kwemashoko.
Chikumbiro chekutsvaga kwemashoko ako ega. Iwe unogona kutikumbira kuti tibvise data yako pachako, uchiita zvakanaka yako "kukanganikwa", uko pasina chikonzero chakanaka chekuti tirambe tichichiita. Ichi chikumbiro chokubvisa data yako pachako chichaguma nekuvhara kwekodha yako uye kuguma kweukama hwekambani.
Kumbira 'kubvisa' kana kubvisa kushandiswa kwemashoko ako ega mune mamwe mamiriro ezvinhu, akadai sokuti iwe unopikisana nekururama kweruzivo rwemunhu wega kana kuti chinotitambudza. Hazvizotidzivirire kuchengeta mashoko ako ega. Tichakuudza zvisati tafunga kusabvumirana nechinangwa chipi zvacho chakakumbirwa. Kana takazivisa ruzivo rwako kune vamwe, tichazivisa nezvekudziviswa kana zvichibvira. Kana iwe ukatibvunza isu, kana zvichibvira uye zvinotenderwa kuita kudaro, tichakutaurirawo watinenge tagovana nemashoko ako ega kuitira kuti iwe ugovaudza zvakananga.
Iva nekodzero yekupikisa dunhu rako rega richigadziriswa nekuda kwekutengesa zvinangwa. Izvi zvinosanganisira kufungidzira mune zvakawanda sezvazviri maererano nekutengesa zvakananga. Kana iwe unopesana nekugadziriswa kwechinangwa chekutengeserana zvakananga, ipapo ticharega kushandiswa kwemashoko ako ega nekuda kwezvinangwa zvakadaro.
Chinangwa, chero nguva, kune chero zvasarudzo zvatingatora izvo zvakanyatsogadzirirwa pakugadzirisa kushandiswa (kusanganisira kufungidzira). Kufambisa kunosanganisira kushandiswa kwekombiyuta inotibatsira kuita zvisarudzo zvese, zvichienderana nemashoko ako ega atinounganidza kubva kwauri kana kubva kune vamwe vatatu.
Iwe haufaniri kubhadhara mari yaunowana kuti uwane ruzivo rwako pachako (kana kushandisa imwe yemamwe kodzero). Zvisinei, tinogona kubhadhara mari yakakodzera kana chikumbiro chako chiri pachena chisina kukwana, chidzokorora kana kudarika. Zvimwe, tinogona kuramba kuterera chikumbiro chako mumamiriro aya.
Tinoedza kupindura kune zvikumbiro zvose zvakakodzera mumwedzi umwe. Dzimwe nguva zvinogona kutitorera nguva yakareba kupfuura mwedzi kana chikumbiro chako chiri chakanyanya kuoma kana iwe wakaita zvikumbiro zvakawanda. Muchiitiko ichi, tichakuzivisa iwe nekukuchengetedza iwe.
Tinoedza kuedza kuchengetedza kwemashoko akaiswa kwatiri, zvose panguva yekutumira uye kana takazigamuchira. Tinochengetedza zvakakodzera kutungamira, zvekugadzirira uye zvepanyama kuchengetedza Dunhu Dzepamwe nekusaona kana kusina mvumo yekuparadzwa, kuraswa kwepasipo, kushandurwa kusina mvumo, kusagadziriswa kusina mvumo kana kuwanika, kushandiswa zvisina kunaka, uye chero imwe nzira ipi zvisiri pamutemo yekushandura kweDunhu reMunhu pane zvatinowana. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, firewalls, kuchengetedzwa kwephasiwedi uye mamwe mawaniro uye kuvimbiswa kwekutendeseka.
Zvisinei, hapana nzira yekuendesa paInternet, kana nzira yekugadzira magetsi, ndeye 100% yakachengeteka. Hatigone kuvimbisa kana kuchengetedza kuchengeteka kwemashoko chero ipi zvayo watinotumira kwatiri uye iwe unozviita iwe pachako panjodzi. Isuwo hatigone kuvimbisa kuti ruzivo rwakadaro harungasviki, rwakarondedzerwa, rwakashandurwa, kana rwuri kuparadzwa nekuputsa chero ipi zvayo yemuviri, tekodhi, kana kuchengetedza kuchengetedzwa. Kana iwe uchida kuti Dhividu yako Yega yave yakanyengedzwa, tapota taura nesu.
FXCC inogona kuchengetedza ruzivo rwako mune zvinyorwa zvaro zvekutsvaga kuitira kuti upindure mibvunzo kana kugadzirisa matambudziko, kupa hutsva uye hutsva huri hutsva uye kugadzirisa chero zvido zvepamutemo zvekuchengetedza dambudziko. Izvi zvinoreva kuti tinogona kuchengetedza ruzivo rwenyu mushure mekunge masira kushandisa Semu kana maitiro edu kana kuti pamwe nekubatana nesu nesu.
Cookies zviduku zvinyorwa zvakachengetwa pamakombiyuta yako kutibatsira kuti tive nemhando ye browser uye zvirongwa zvaunoshandisa, kwawakave uri pawebsite, paunodzokera kune webhusaiti, kwawakabva, uye kuti uone kuti ruzivo rwako kuchengeteka. Chinangwa chemashoko aya ndekukupa ruzivo rwakakosha uye runobudirira pane imwe nzvimbo yeFXCC, kusanganisira kuisa mapeji ewebhu maererano nezvido zvako kana zvido zvako.
FXCC inogona kushandisawo vanhu vanozvimiririra kunze kwevanopa mazano kuti vaone kufamba uye kushandiswa pawebsite. Cookies inowanzoshandiswa pawebsite dzakawanda paIndaneti uye unogona kusarudza kana uye sei iyo cookie ichagamuchirwa nekushandura zvaunofarira uye zvisarudzo mu browser yako. Iwe unogona kusakwanisa kuwana zvimwe zvikamu zve www.fxcc.com kana ukasarudza kudzivisa kubvuma kwekuki mu browser yako, kunyanya nzvimbo dzakachengeteka dzewebsite. Saka tinokurudzira kuti uwane kubvumirwa kwekiko kuti ubatsirwe nemishandira yese iri pawebsite.
Iwe une kodzero yekugadzirisa kana iwe uchibvuma kana kuramba makiki nekugadzirisa kana kugadzirisa web browser yako yekudzivirira kugamuchira kana kubvisa makiki. Kana ukasarudza kuramba makiki, iwe unogona kushandisa webhusaiti yedu asi ruzivo rwako kune mamwe maitiro uye nzvimbo dzewebhu rewebhu redu zvingadziviswa. Sezvo nzira iyo iwe unogona kuramba ma cookies kuburikidza newebhuki web browser yako inosiyana kubva kune browser-to-browser, iwe unofanirwa kushanyira mushandisi webasa rako rubatsiro kuti uwane mamwe mashoko.
Kana iwe uchiramba uchishandisa webhusaiti iyi usingashandisi maitiro ekiki web browser yako iwe uri kubvumirana nemutemo wedu wekuki
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pekiki uye kuti ungatungamirire sei kuburikidza ne browser yako / device shanyirai www.aboutcookies.org
Kana uchida kutitumira nesu nemibvunzo chero ipi zvayo kana mazano pamusoro pehutano hwedu hwega, tapota usununguka kutitumira nesu kuburikidza ne-e-mail, kero yepositi, foni nefeksi kana kushandisa sangano rekukurukura kuI IM mutariri wevashandi.